Indlela yokukhawuleza ukufumana iimveliso eziphambili kwi-Amazon?
Akukho-brainer ukuba wonke umthengisi ophumeleleyo kufuneka ahlale ehlaziywa kwiimveliso zeevenkile zithengiswayo kunye nokuqonda ngokupheleleyo iimveliso ezininzi zokukhangela kwi-Amazon. Kutheni le nkcazelo ibaluleke kangaka kuwo wonke amashishini athengisa ukuthunyelwa kwe-intanethi namhlanje? Kungenxa yokuba kungekhona kuphela izitolo zewebhu, kodwa izitolo zokuqala zetena nezitya kunye neendawo zokuthengisa - zonke zibhekiselele ekunikezeni abantu kanye loo mveliso abantu abayifunayo. Kuthetha ukuba ukunikela ngokugqithiseleyo kakhulu kwaye iimveliso ezikhoyo eziqhelekileyo mhlawumbi yindlela ephela yokuguqula abathengi abanokuba baninzi kubathengi bokwenene. Ngoko, akumangalisi ukuba konke ukwenza okulungileyo ukuba wenze uluhlu lwezinto zakho ezikhethiweyo ezipakishwe yimveliso ekhangelwe kakhulu kwi-Amazon - unalo mbono ocacileyo ukuba usuhambe uhamba ngendlela efanelekileyo. Kulabo baziva bengenakuqinisekiswa kwiintambo ezilungileyo ezifunekayo ukuze bafumane i-Topsellers ephezulu kwi-Amazon okanye abanokuthembisa ukuba bathengise ngokunikezela nje ngokufumana ukuthandwa kweso sikhashana-nantsi isikhokelo esifutshane sokuba ncedise kunye nokukhululeka.
Ukufumana iMveliso ekhangelwe kakhulu kwi-Amazon ukuthengisa nge-Intanethi
Khangela kwiiGoogle Trends
Indlela elula yokufumana iimveliso eziphambili ukunikezela kwiintengiso zakho zee-Amazon ngokuzigcwalisa nje nayiphi na into enokuthenjwa-ngqo kwi-Google Trends yokukhangela ibha. Akukho mfuneko yokuthetha ukuba esi sixhobo sasekuqaleni se-intanethi ye-intanethi sifumaneka kwindawo evulekile. Zama le ndlela echanekileyo kunye nenzululwazi ukukhawuleza ukuba uhlolisise ukuba imveliso ethile iphakame ukufunwa kwabathengi, okanye akukho nto. Yonke into malunga neendlela zeGoogle iyicacisa. Ndiyathetha ukuba nayiphina imveliso ephandwayo, kuquka neyo e-Amazon, ingalindelwa ngokufanelekileyo ukuba ifunyenwe ngaphakathi kwimiqulu yokukhangela kunye neendawo zendawo ezichazwe ngeGoogle Trends.
Khangela iMveliso eDumeleyo kwenye indawo kwiWebhu
Ngaphandle kwama-Amazon, unokuphinda ukhangele ezinye iindawo zemarike ezisekhompyutheni ezithandwayo ngokwaneleyo phakathi kwabathengisi be-ecommerce ukuze ufumane umfanekiso omkhulu wokuhlanganiswa kwemarike yonke - nje ukutyelela kwiplani enye ye-ecommerce. Ndiyathetha ukuba unokuqonda ngokucacileyo ukuba yiyiphi imveliso esele idume ngokuthengiswa, okanye inokuthembisa ukuba yizonto ezishisayo ngokukhawuleza. Ukuhlawula ukuvakasha okuphindaphindiweyo kumacandelo eemveliso ze-Amazon kunye nabathengisi abagqwesileyo, jonga ukuthengisa izinto eziphezulu kwi-eBay, kwakunye neyona ndlela ihamba phambili kwi-Alibaba esitolo se-intanethi.
Fumana uncedo loNgcono ngeJungleScout Tool Tool
Kwaye ngoku yisikhathi sokuzisa i-JungleScout ithuluzi lika-Amazon ukuba lidlale emva kwayo yonke into. Kuthekani ukuba unakho ukulibala malunga naloo myalezo kanye nento yonke? Fumana uncedo ngomncedisi ongcono kwi-intanethi eyenzelwe ukulandelela konke ukuthengiswa kunye nemilinganiselo yentengo, ukujongana namathuba okufumana umkhiqizo ngaphandle apho, kunye nokuba luncedo kakhulu ukufumana iimveliso eziphambili kwi-Amazon. Ngaphezu koko, usebenzisa i-JungleScout, awukwazi kuphela ukufumana nayiphi na imveliso ethandwayo oyifunayo, kodwa fumana ingqiqo ebalulekileyo yokucinga ukuze ulungiselele uluhlu lwakho lwemveliso ngamagama angundoqo kunye nemigca yokukhangela imilenze. kwiimarike zomhlaba wonke.